Umcimbi, owabanjelwa eNew York ngomhla wokugqibela kaMatshi, ngokugqithiseleyo udluliselwe ngqalelo kwimidiya ephathekayo, kodwa ngeze. Emva koko, kwakuyinto ebalulekileyo, emangalisayo, ekholisayo yokubonisa iChanel Metiers d'Art. Inkundla yayikuthi, "ukubetha" ngumdumo, kwaye iindawo ezikulo mgca wokuqala zithathwe ngeenkwenkwezi ezinjalo eziqaqambileyo ukuba iimodeli zafuneka zikhanyise amehlo abo ngokukhanya okukhulu.
Apha ungabona uVanessa Parady nentombi yakhe uLily-Rose Depp, i-Dakota Johnson, uJulianne Moore, uLily Collins nabanye abaninzi, abatyebileyo nabadumileyo. I-ayisikhilimu yoluntu olufake imfashini yavuya kakhulu kwimbonakaliso emangalisayo-ukubonakaliswa kweengubo zaseParis-Salzburg, ezazisetyenziswe ekupheleni konyaka odlulileyo. Inzala ephezulu ekuqokeleleni ukusuka kwicala lababantu abadumileyo akathethi nje ngokuhlonela uKhanel noKarl Lagerfeld - ngokucacileyo, ukuqokelela kulungelelaniso olulodwa.
Ezinye zeenkwenkwezi ezimenywe nazo zenza inxaxheba kwimbonakalo emangalisayo. Ngokomzekelo, uFarrell Williams noKara Delevin benza iC Live live Ihlabathi, abathandi befashoni abakhumbula kwifilimu yefashini uKarl Lagerfeld "Ukuzalwa kwakhona."
U-Anthony Vaccarrello uza kufaka iqoqo lakhe lokuqala kwiVerus Versace eLondon
Iqoqo le-Summer Kira Plastinina
Intuition yamakhosikazi: siyakhula kwaye siyisebenzise
Inyosi iqhube ngobisi bekakhukhunathi
Indlela yokwenza isobho kwi-mushrooms ye-chanterelles amakhowe, iresiphi ngesithombe
NgeSonto lePalm - ndivuyisana ngeprose neenkondlo. Iimfono ezimfutshane ezifutshane zivuyisana ngeCawa lePlanga
I-Psychology yobudlelwane phakathi komkhwekazi nomalokazana